လူမိုက်ကြီး (၁၀)ယောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » လူမိုက်ကြီး (၁၀)ယောက်
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Jul 5, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle | 18 comments
တစ်ခါတုန်းက သူဌေးကြီးတစ်ယောက်သည် တပည့်ဖြစ်သူအား လူမိုက်ကြီး
(၁၀)ယောက်အားရှာဖွေ၍ စာရင်း ကောက်ခဲ့ရန် တာဝန်ကေးလိုက်သည်။
တပည့်ဖြစ်သူကလည်း သူဌေးကြီး၏ တာဝန်ပေးချက်အရ စာရင်း ကောက်ရန်
… သူဌေးကြီးတပည့်သည် ခရီးထွက်ခွာလာရာ မြစ်တစ်ခု သို့ရောက်လာ၏။
လူတစ် ယောက်သည် မြစ်ထဲမှရေများကို ခပ်ထုတ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏။
ဘာကြောင့်ခပ်ထုတ်နေသည်ကို သိချင်လာ၍ အကြောင်းစုံကိုမေးမြန်းကြည့်သည်
“ရွာထဲက ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင် အလှအပလေးက မြစ်ထဲကရေတွေ
ကုန်အောင်ခပ်ထုတ်နိုင် ရင် ကျွန်တော်ကို လက်ထပ်မယ်တဲ့။ အဲဒါ သူအချစ်ကို
အင်းတော်တော် မိုက်မဲတဲ့လူပေပဲ။ ထိုသူနံမည် ကိုမေးမြန်း၍ လူမိုက်နံပါတ်(၁)
ထိုမြစ်ကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ထွက်ခွာလာရာ လူတစ်ယောက်သည်
မြစ်ထဲသို့ခေါက်ခေါက်အခါခါ လှော် နေသည်ကို တွေ့ရပြန်သည်။
သူဌေးကြီးရဲ့ တပည့်က အကြောင်းအရင်း ကိုမေးမြန်းလေ၏။
“ ကျူပ်သူငယ်ချင်းပေါ့ မနေ့က ကျူပ်နွားကို ဌားပြီး တစ်နေကုန်ခိုင်းလိုက်တာ
နွားကိုဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့၊ ကျူပ်က လဲဘယ်ရမလဲ သူလှေကိုဌားပြီး
တစ်နေလုံးအားရပါးရ လှော်ပြီး လက်စားချေနေတာလေ”
သူဌေးကြီးတပည်လဲ အံသြစွာ ဖြင့်ထိုသူ၏ နံမည်ကိုမေးပြီး
လူတစ်ယောက် သစ်ပင်ပေါ်၌ ရှိနေ၏။ သစ်ခုတ် သမားက ထိုသစ်ပင်
“ ဟေ့လူ သစ်ပင်ပေါ်က ဆင်းလေဗျာ သစ်ပင်ခုတ်လဲနေတယ်”
“ ကျွန်တော် သစ်ပင်ပေါ်တတ်တာ မဆင်းတတ်လို့ တွေ့တဲ့သစ်ခုတ်သမားပြောပြီး
သစ်ပင်လဲခိုင်းနေတာပါ။ သစ်ပင်လဲမှ ကျွန်တော် လွယ်လွယ်ကူကူ
အောက်ရောက်နိုင်မှာပါ ” ။
သူဌေးကြီးတပည့်လည်း အံသြသွားပြီး မထူးပါဘူး ဒီလူလဲနံမည်မေးပြီး
စာရင်းသွင်းလိုက်ရုံပေါ့။ သူဌေးကြီး တပည့်လည်း နံမည်မေးပြီး လူမိုက် နံပါတ်
ဒီလိုနဲ့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ လာခဲ့ရာ တောစပ်တစ်နေရာ အရောက်တွင
် လူတစ်ယောက်သည် ဓားမကိုကိုင်လျှက် တွင်းဝတစ်ခုတွင်ထိုင် နေလေသည်။
“ ဟေ့လူ ခင်ဗျား တွင်းဝထိုင်ပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲ “
“ ကျွန်တော် မြေကြွက်တစ်ကောင်လိုက်ဖမ်းနေတာပါ။ အခုတွင်းထဲ
ဝင်သွားလို့ပါ။ကြွက်ထွက်လာအောင်စောင့် နေတာပါ။ထွက်လာလို့ကတော့ ဟောဒီဓားနဲ့
“ မထွက်လာရင်ကောဗျာ “
“ထွက်လာမှာပါဗျာ၊ ကြွက်ကတွင်းထဲမှာ ကြာကြာဘယ်နေနိုင်ပါမလဲ၊ သူနေရ
ထိုင်ရကြပ်လို့ ထွက်လာရင်တော့ အသိပဲ၊ ကျွန်တော် ကမြေကြွက်သား
သူဌေးကြီးတပည့်လည်း ထိုသူအားနံမည်မေးပြီး လူမိုက်နံပါတ် (၄)
အဖြစ်မှတ်လိုက်လေသည်။ လူမိုက်စာရင်း ကောက်ရန်ဆက်လက်ထွက်ခွာ လာရာ
ရွာအဝင်လမ်း တွင် လူတစ်ယောက် လက်နှစ်ဖက်မြောက်လျက် ဖင်ထိုင်လျက်လဲနေသည်ကို တွေ့ရ၏။
“ဟေ့လူ ထလေဗျာ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ခြေထောက်နာသွားလို့ မထနိုင်ဘူးလား၊
ကျွန်တော်ထူပေးမယ် ဟုပြောပြော ဆိုဆိုနှင့် ထိုလူလက်နှစ်ဖက်ကို
ကိုင်လိုက်ရာ” “အား မကိုင်နဲ့ မကိုင်နဲ့ ကျွန်တော် ကိုထူရင် ချိုင်းကမပြီး ထူပေး”
ဟုပြေလေ၏။ သူဌေးကြီးတပည့်လည်း ထိုလူ ပြောသည့်အတိုင်း
ချိုင်းကမပြီးထူပေးလိုက်လေ၏။ သို့သော် လက်နှစ်ဖက်ကမြောက်မြဲအတိုင်း
မြောက်နေ၏။ “ ခင်ဗျား လက်နှစ်ဖက်က ချလို့မရဘူးလား အကြောကပ်နေတာလား “။
“မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော် သေတ္တာ ဝယ်မလို့မြို့ပေါ်တတ်လာတာ၊ အဲဒါအိမ်က သေတ္တာ
အဟောင်း အတိုင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တိုင်းလာခဲ့တာ၊ မတော်တဆ ချော်လဲပြီး
မိတ်ဆွေရောက်လာပြီး ထူပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်” ။
သူဌေးကြီးတပည့်လဲ ထိုသူနံမည်မေး၍ လူမိုက်နံပါတ် (၅)
အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ သူဌေး ကြီးတပည့်လည်းရွာထဲသို့ဝင်လာလေ၏။
လမ်းခရီးတွင် လူနှစ်ယောက်ငြင်းခုန်နေသည် ကိုတွေ့ရ၍ အကြောင်း စုံကိုမေးကြည့်၏။
“ကျွန်တော် ကပြောတယ်၊ ငွေထုပ်ကောက်ရရင် ခရီးကအတူတူ ထွက်လာတာမို့
တစ်ယောက်တစ်ဝက် ပိုင်သင့် တယ်လို့”
“ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး ငွေထုပ်ကို အရင်တွေ့တဲ့လူက
ပိုပြီးရသင့်တာပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ “
“ နေပါဦး ခင်ဗျား တို့က အဲဒီငွေထုပ် ကိုကောက်ရထားလို့လား”
“မကောက်ရပါဘူးဗျာ၊ ကောက်ရခဲ့ရင် ဆိုပြီး ငြင်းခုန်နေကြတာပါ”
ချက်ချင်းပင် ထိုသူနှစ်ယောက်၏ နံမည်များမေးပြီး စာရင်းသွင်းလိုက်၏။
လူမိုက်နံပါတ်(၆) နှင့်လူမိုက်နံပါတ်(၇) ဟုစာရင်းမှတ်လိုက်၏။
ထိုနောက် သူဌေးကြီးတပည့်လည်း အကြောင်းအရာအဖြစ်အပျက်များ နှင့်တကွလူမိုက် (၇)ဦး၏
နာမည်စာရင်းများ ကိုပေးအပ်လိုက်လေ၏။ သူဌေးကြီးလည်း သူတပည့်တင်ပြသော
စာရင်းအားကြည့် ၍ “ ငါကောက်ခိုင်းတာက ဆယ်ဦးကွ၊ မင်းကောက်ခဲ့တာ
ခုနှစ်ဦးပဲရှိသေးတယ်၊ သုံးဦးလိုသေးတာပဲ “။
“ ဆယ်ဦးပြည့်ပါတယ် သူဌေးမင်း၊ ကျန်တဲ့ သုံးဦးက ၊ ဘာမှ အရည်မရအဖတ်မရ
လူမိုက်စာရင်းကောက်ခိုင်းတဲ့ သူဌေးမင်းနဲ့ လူမိုက်စာရင်း လိုက်ကောက်တဲ့
ကျွန်တော်ရယ်၊ ဘာမှ အရည်မရ အဖတ်မရ ဘာဗဟုသုတမှ မရှိတဲ့ ဒီပိုစ့်ကို
ဖတ်တဲ့လူရယ်ပေါင်းလိုက်ရင် ဆယ်ဦးပြည့်တာပေါ့ သူဌေးမင်းရယ် “။
ကဲ ဘယ်သူကအရင်လူမိုက်လုပ်ကြမလဲဟေ့း))
ပြောစရာလား… ကိုကိုလူဆိုး ဆိုမှတော့ နာမည် နဲ့လိုက်အောင် အရင်ပေါ့
မန်းတစ်ခုလုံးဆို လူမိုက် ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ ?
ဟင်းးးးး ငါနော်………. ပြောလိုက်ချင်ဘူး
မူရင်း စာအုပ် (သို့မဟုတ်) website လိပ်စာကို ဖော်ပြသင့်ပါတယ် ….
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖတ်ဖူးပြီးသားပါ … ဘာအကြောင်းအရာမှ ကိုယ်တိုင်ချမရေးဘဲ ဒီအတိုင်း တင်ပေးထားတာဆိုတော့လေ …
copy/paste ဆိုရင်လည်း copy/paste ဖြစ်ကြောင်းပါ ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်ဗျ …. ;P
ကို ကင်းရော.. ကိုယ်တိုင်ရေးဖူးပါသလား.. အဲလောက်တက်နေလည်းစာရေးဆရာသာလုပ်စား..ကိုယ်တိုင်ရော ဘယ်လောက်များကျွမ်းနေလည်း. ကိုယ်ပိုင် website ရော ရှိလား..
လူမိုက် ၁၀ ယောက်ထည်းမှာပါသွားမယ်နော် ဟွန့်
ကိုယ်တိုင်လား ကိုယ်တိုင်တော့ ရေးတာပေါ့ (စာကြွင်း။ ရည်းစားစာများနှင့် …..)
စာရေးစရာလုပ်စားဖို့ အရည်အချင်းမရှိပါဘူး …
ကိုယ်တိုင်လည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရာ သိပ်မရှိပါဘူး အကုန်လုံးကို သင်ယူလေ့လာနေဆဲပါပဲ …..
ကိုယ်ပိုင် Website လုပ်ဖို့ အခမဲ့ ပေးတဲ့ ဒိုးမိန်းလိပ်စာတွေကို မရှာတတ်သလို …
ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်ရလောက်အောင်လည်း မချမ်းသာပါဘူး ….. အဲဒီထက် ပိုအရေးကြီးတာက ကိုယ့်ရဲ့ website မှာ တင်မယ့်အချက်အလက်တွေ အပြည့်အစုံ အလုံအလောက် မရှိသေးဘူးဗျ ….
လုပ်လည်း မလုပ်တတ်ပါဘူး ………….
ကွန်ပျူတာဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို မရေးတတ်လို့ မြန်မာလိုပဲ ရေးတာသာကြည့်ဗျာ …..
လူမိုက် ၁၀ ယောက်ကဆိုတာကလည်း comment ပေးတဲ့သူတွေ မပေးခင်ကတည်းက ပြည့်သွားပီလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်မိတယ်ဗျ … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျား စာကို မဖတ်ဘဲနဲ့တော့ ကူးတင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်မိလို့ပဲ …..
နောက်ပြီး ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ comment မှာ ခင်ဗျားကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်ချက်မျိုးနဲ့ ရေးပြ ထားတာကို ……………. Kokolusoe က မကျေမချမ်းနိုင်နဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ comment ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ …… အင်း ………………………………………….
ဟုတ်တယ်ကိုကင်းရဲ့ အမှန်က မန်းကေဇတ်က သတင်းစာလေ..အခုက သတင်းအပြင် တခြားပို့တွေက များနေတယ် အကြံပေးကြည့်တာပါ..ဆောင်းပါးတွေ..
လူဆိုးက စာရေးဆ၇ာမဟုတ်ပါဘူး.. ကျွမ်းကျင်ကွန်ပျူတာပညာရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး
ဒါပေမယ့်နည်းနည်းတော့ကလိတက်တယ်..လူဆိုးရဲ့ ဆိုဒ်က http://www.lotaya.weebly.comပါ
ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့စိတ်ခုမိတယ် ကိုကင်းက အသက်ဘယ်လောက်ရှိလည်းကျွန်တော်မသိပေမယ့် ကို လို့ တပ်ပီးခေါ်တယ်.. ကိုတင်းပြန်ပေးထားတဲ့ကွန်မန်းက ခင်ဗျားတဲ့ မြန်မာလူမျိုးမှဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်စဉ်းစားမိတယ်
အခုလိုအချင်းချင်းပြောနေမဲ့အစား မန်းကေဇတ် ဒီထက်ပိုပီး နာမည်ကြီးအောင် လုပ်မိဘို့ စဉ်းစားဘူးလား တော်ပါပီ.ဒီကွန်မန်းဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်တာကောင်းတယ် ပွိုင့်နုတ်လည်းအေ၇းမကြီးဘူး ကျွန်တော်တင်တဲ့ပို့တွေက စာဖတ်သူအတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့ဟာတွေပဲ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်..ကဲ ကိုကင်း haveanice day
ရွာထဲမှာသတ္တိရှိတဲ့ မိုက်တဲ့လူတွေထွက်ခဲ့။ (စာရင်းကောက်မလို့ပါ)
ကျွန်ုပ် ဒီပိုစ့်ကို မဖတ်လိုက်ပါ။
ဘယ်သူ မိုက်လဲ .. မိုက်တဲ့သူ ထွက်ခဲ့ ၊ ကျန်တဲ့ သူနဲ့ ချမယ် …..
ဟိဟိ … မိုက်တဲ့သူနဲ့တော့ ချရဲဘူး ကြောက်တယ် ….
ဖတ်တော့ဖတ်လိုက်တယ် အောက်ဆုံးစာပုဒ်တော့ မဖတ်ဖြစ်လိုက်ဘူး
မိုက်တယ်ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။ လိမ္မာဖို့သာ ခက်တာ။ လိမ္မာဖို့ကတော့ အတော့်ကို ကျင့်ယူရမယ့်ကိစ္စပဲ။